Amaphedi Awenguquko Edayimane
3 Intshi Ceramic Bond Transition Diamond Pads Polishing For Concrete Floor Grinding
I-ZL-16CT Iphedi yokupholisha idayimane ye-Ceramic bond, njengebhondi yesikhashana phakathi kwebhondi yensimbi namaphedi wokupholisha webhondi ye-resin, izosusa ukuklwebheka kwebhondi yensimbi ngokushesha kunamaphedi okupholisha ochungechunge oluyingxube yendabuko, futhi ngeke kwenyuse izinga lokushisa ngesikhathi sokugaya ukhonkolo waphansi.
Iphedi yokupholisha ye-hybrid yokupholisha phansi kukakhonkolo
I-Z-LION 16KM hybrid transitional polishing pads amaphedi okupholisha we-resin bond anamashidi ensimbi ashunyekiwe.Isetshenziselwa kakhulu ukususa ukuklwebheka okujulile kwamaphedi okugaya amabhondi ensimbi futhi kuguqule inqubo yokupholishwa isuke ekupholishweni yensimbi iye ekupholiseni inhlaka.Ngama-chips ensimbi ashunyekiwe, i-pad inolaka kakhulu, isusa imihuzuko eqinile kahle futhi ishiye imihuzuko emihle.
I-Z-LION 16KH iphedi yokupholisha yethusi yenguquko ikuphethini yedizayini ye-turbo evumela ingcindezi engcono yamathuluzi ngenkathi isavumela udaka nemfucumfucu ukuthi isuke endaweni yokusebenza esebenzayo.Iphedi ikwibhondi yethusi enezinzuzo eziphawulekayo ngaphezu kwamaphedi okupholisha ibhondi ye-resin hhayi kuphela ekhonweni lokusika kodwa nempilo yokuphila.Iphedi yakhelwe ukwenza lula uguquko phakathi kwesiteji sokugaya insimbi kanye nesiteji sokucisha nokupholisha inhlaka.
Iphedi yokupholisha ye-semimetal transitional yokupholisha phansi kukakhonkolo
I-Z-LION 16B Semimetal transitional polishing pad iyi-resin bond polishing pad enamasegimenti ensimbi ashunyekiwe.Iphedi ingasula imihuzuko ejulile ebangelwa amathuluzi okugaya ebhondi yensimbi enolaka ngokuphumelelayo ukuze kwenze ngemva kokupholisha kube lula.Isetshenziswa kakhulu njengoxhumano noma uguquko phakathi kokugaya insimbi nokupholisha inhlaka.
Iphedi yokupholisha ye-Copper yokupholisha phansi kukakhonkolo
I-Z-LION 16AH amaphedi okupholisha ekhopha awawona amaphedi e-resin anamashiphu ethusi ashunyekiwe kodwa amaphedi okupholisha ebhondi yethusi.Isetshenziswa kakhulu njengamaphedi okupholisha esikhashana ukuze kususwe imihuzuko ejulile yokugaya ibhondi yensimbi futhi kuguqule inqubo yokupholishwa isuke ekupholishweni yensimbi iye ekupholishweni kwenhlaka.Amaphedi e-Copper transitional polishing anzima futhi anolaka kunamaphedi e-resin.